राजनितिक रुपले दाङले सिङ्गो देशको नेत्रित्व गर्छ ,शंकर पोखरेल « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
राजनितिक रुपले दाङले सिङ्गो देशको नेत्रित्व गर्छ ,शंकर पोखरेल
४ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:३५ मा प्रकाशित
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा निर्वाचन दाङ क्षेत्र नं. २ प्रदेशसभा २ का वाम गठबन्धन उम्मेदवार मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभाको निर्वाचन हुदैछ । दलहरु अहिले स्थानिय मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन । दलका नेताहरुले दाङ जिल्लाको विकास र समृद्धिको खाका जनतामाझ लैजाने तयारीम समेत जुटेका छन् यसै सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट पाँच नं. प्रदे शका प्रस् तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मे दवार एवं दाङ क्षे त्र नं.२ अन्तर्गत प्रदे शसभा २ का उम्मे दवार शंकर पो खरे ल संग दाङको समृद्धिका विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प  ।
आगामी मंसिर २१ गते चुनाव हुदैछ तयारी कस्तो छ ?
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेकाछौ प्रदे श र के न्द्रको चुनाव हुदै छ । विगतमा हाम्रो आन्दो लन मूलतः अधिकारका प्रश्नमा के न्द्रित रह्यो  । संविधानसभाबाट संविधान बने पछि नागरिकका अधिकारहरु संविधानमा संस् थागत भएका छन । अब ती अधिकारहरुलाई जनताको समृद्धिमा र राष्ट्रको समृद्धिमा लगाउनुपनेर् छ । ने कपा एमाले र माओ वादी के न्द्र समृद्धिको लडाइका लागि एकताबद्धरुपमा अगाडि बढ्ने संकल्पका साथ चुनावी तालमे लमा छौ ं र चुनावपछि एउटै बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गनेर् यो जनामा छौ ं । त्यसलाई आधार मानेर दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रचार प्रसार अभियानमा जुटेका छौ । जनतामा माझमा पुगेका छौ । त्यसका साथै म र कृष्णबहादुर महराजी तीनवटै निर्वाचन क्षे त्रहरुमा संयुक्त कार्यकर्ता भे लाहरुमा सहभागी हुदै आएका छौ । कार्यकर्ताहरुलाई वाम गठबन्धनका महत्वका बारे मा भो लिका दिनहरुमा पार्टी एकताका पक्षमा भइरहे का प्रयासबारे र राष्ट्रको समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन किन सफल हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गनेर् खालका कामहरु सम्पन्न गरिसके का छौ । चुनावी गतिविधिहरुले गति लिइसके का छन । म के ठान्छु भने नौ वटै निर्वाचन क्षे त्रमा विजयलाई सुनिश्चित गरिसके का पनि छौ भने चुनावी गतिविधिहरुलाई उत्सवमय बनाउने र लोकप्रिय मतका साथ वामपन्थी उम्मे दवारहरुलाई विजयी बनाउने यतिबे ला हाम्रो लक्ष्य छ ।
तपाई मत किन दिने ?
दुईवटा ठूला दलहरुले प्रदे शको ने तृत्व गनेर् गरी मलाई उम्मे दवार बन्न आग्रह गर्नुभयो  । माओ वादी के न्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले का अध्यक्ष के पी ओ लीले जुन आग्रह गर्नुभयो त्यसलाई मै ले दाङ जिल्लाको विकासको सम्भावनाका रुपमा ग्रहण गरे र प्रदे शको उम्मे दवार स् वीकार गरे । मै ले जित्दा खेरी प्रदे शको ने तृत्व हासिल गनेर् कुरा सुनिश्चित छ । अरु कसै ले जित्दा प्रदे शको ने तृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना छै न । त्यसै ले पनि दङाली जनताले प्रदे शको ने तृत्व गनेर् सम्भावना बो के को व्यक्तिलाई विजयी गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता दाङमा बनिसक्या जस् तो मलाई लाग्छ । समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मे रा आप्mना सो चहरुलाई म पाँच नं. प्रदे शको ने तृत्वकर्ताको हिसाबले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छु । त्यसले पनि जनताले अवसर दिदा म पाँच नंं. प्रदे श मात्र नभई राष्ट्रको समृद्धिको प्रश्नमा पनि आफ्ना सो चहरुलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गनेर् काम गनेर् छु र त्यसले राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण यो गदान दिने छ भन्ने ठान्छु ।
वाम गठबन्धन किन ?
बाम गठबन्धनका बिषयमा नेता कार्यकर्ता जति उत्साहित छन त्यो भन्दा ज्यादा जनता उत्साहित छन । त्यसअर्थमा जनताले पार्टीहरुबीचको एकता चाहे का रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसके को छ । अर्कोतर्फ अधिकार प्राप्तिको लडाइमा जति धे रै पार्टीहरु भए पनि, ने ताहरु भए पनि खासै फरक पदैर् नथ्यो । किनकि राज्यलाई कमजोर पार्नका लागि जताबाट प्रहार गरे पनि हुन्थ्यो  । अधिकार प्राप्तिको लडाइ संस् थागत भइसके पछि समृद्धिको लडाइ“को सन्दर्भको कुरा गर्दा धे रै पार्टी उपयुक्त हो इन । त्यसले राजनीतिक अस् थरता जन्माउछ । ने पालको राजनीतिको सबभन्दा ठूलो रो ग भने को राजनीतिक अस् िथरता हो  । नौ /नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने जुन चक्र छ त्यो चक्रलाई तो ड्न जरुरी छ । त्यसका लागि पनि हामीले अब वामपन्थी गठबन्धनको जीतको आवश्यकता दे खे का छौ । जनताले राजनीतिक स् थायित्व अहिले को वाम गठबन्धनबाट सम्भव दे खे का छन् । अकोर् तर्फ आर्थिक समृद्धिको कुरा गनेर् बित्तिकै कस् तो प्रकारको आर्थिक, सामाजिक व्यवस् था निर्माण गनेर् , कुन बाटो बाट समाजलाई समृद्धिको बाटो तर्फ लै जाने भन्ने प्रश्न मुख्य हो  । हामी उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले श्रमजीवी वर्गलाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्न चाहन्छौ। उत्पादक शक्तिको विकास गर्न चाहन्छौ  । राष्ट्रिय पूजीको विकासका माध्यमबाट श्रमजीवी वर्गलाई बलियो बनाउन चाहन्छौ ं । उत्पादन शक्तिको विकास गर्न चाहन्छौ र राष्ट्रिय पूँजीको विकासका माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौ  । त्यसअर्थमा गठबन्धन प्राकृतिक छ र यो राष्ट्रको समृद्धिको प्रश्नमा एक ठाउमा उभिएका छौ । अकोर् तिर ने पाली कांग्रे स उदारवादको पक्षमा छ । उसले व्यापारिक पूँजीवादको पक्षपो षण गर्छ । व्यापारिक पूँजीवाद भने को दलाल, नो करशाही पूँजीवादको जन्मदाता पनि हो  । त्यसले राष्ट्रिय स् वाधिनता र स् वाभिमानको पक्षमा आफूलाई खडा गर्न सक्दै न । वामपन्थीहरु राष्ट्रिय स् वाधिनता र स् वाभिमानका पक्षका हिमायतीका रुपमा दे खिएका छन  । उनीहरु जनता सवल हुने कुरालाई राष्ट्र पनि सवल हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास पनि छ ।
दाङ ५ नं. प्रदे शको राजधानी हुन्छ बन्छ ?
हामीले दाङलाई राजधानी यसमा सहमतिमा त्यो काम हामीले सफल बनाएरै छाड्छौ ं । दाङ भूराजनीतिक संवे दनशीलताका हिसाबले पनि उपयुक्त ठाउँमा छ । हावापानीका हिसाबले पनि अत्यन्त अनुकूल छ । यहाँवस् ती विकासका लागि उपयुक्त ठाउँ पनि हो  । पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि दाङ उपत्यका अहिले नै अकुपाई भइसके को छै न । जहाँ यो जनाबद्ध पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न सक्छौ । त्यसअर्थमा प्रदे शको राजधानीका लागि दाङ उपयुक्त छ भन्ने कुरा कुनै विवाद छैन ।
अब नेपालमा अधिनायकवाद आउछ रे नी ?
त्यो काग्रेसहरुले लगाएको आरोप मात्र हो । ने पालको लो कतान्त्रिक आन्दो लनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा बरु आफूलाई लो कतन्त्रको च्याम्पियन ठान्ने ने पाली कांग्रे सका ने तृत्वहरु आन्दो लनबाट पलायन भएका दृष्टान्तहरु धे रै छन । २०१७ सालको घटनापछि ने पाली कांग्रेस नै पञ्चायत प्रवे श गरे का थिए । यो सत्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । अकोर् तर्फ जतिवे ला शे रबहादुर दे उवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिबे ला ने पालको लो कतन्त्र संकटमा प¥यो  । त्यस अर्थमा ने पाली कांग्रे सले लो कतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा ने पालको राजनीतिमा अहवाफ सिद्ध भइसके को छ । मूलतः ने पालको लो कतान्त्रिक आन्दो लनको भे नगार्डको रुपमा ने पालका वामपन्थीहरु लो कतन्त्रको रक्षा गनेर् कुरामा पनि सफल छन भन्ने कुरा विगतले नै पुष्टि गरिसके को छ । त्यस माथि ने पालका कम्युनिष्टहरु लो कतान्त्रिक प्रतिस् पर्धाको बाटो बाट उनीहरु समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छन । त्यसअर्थमा अधिनायकवादको आरो प लगाउने कुरा पूर्णरुपले गलत हो  ।
अब जनताले के पाउँछन् ?
अबको पाँच वर्षभित्रमा हामीले प्रदे शको आधार तयार गछौर् ं । रो जगारीका अवसरहरुलाई सुनिश्चित गर्छांैर्  । प्रदे शका युवाहरु विदे शिनुपनेर् बाध्यकारी अवस् थाको अन्त्य गर्न चाहन्छांै  । जनताको जीवनस् तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि कृषि, पशुपंक्षीपालनको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न रुपरे खा तयार गरे र जनताको आर्थिकस् तरलाई माथि उठाउने काम हामीले गनेर् छौ ं । त्यो कुरा जनताले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूत गर्न पाउने छन ।
मतदाताहरुलाई केही भन्नु छ ?
दङाली मतदाताहरुका बीचमा सदै व अति राजनीतिकरणको कोसिस भयो  । अकोर् तर्फ जातीयताका आधारमा मतदाताहरुलाई प्रभावित गनेर् को सिस पनि विगतमा भयो  । जसले गर्दा आफ्नो ठाउँमा भविष्यका सन्दर्भमा भूमिका खेल् नसक्ने ने तृत्वलाई स् थापित गर्न सकिएन । त्यो चिज अहिले दाङ बासीहरुलाई व्यापकरुपमा महसुस भएको मै ले पाएको छु । त्यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ । कार्यकर्ताहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्यका सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स् वाभाविक रहयो , तर जनताको हकमा भन्ने हो भने आफ्नो जिल्लामा हित कसरी हुनसक्छ, मुलुकको हित कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराका आधारमा लचिलो भएर निस् कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । यसपटक जनताको भावनाअनुसार एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गनेर् उद्दे श्यका साथ चुनावी तालमे लद्वारा अगाडि आएका छौ । वामपन्थी दलहरुलाई साथ दिनका लागि म सम्पूर्ण दङाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु । र, यसपटक हामीले तीनै तहमा वामपन्थीको सरकारको कुरा गरे का छौ ं । यो वामपन्थीहरुलाई काम गर्नका लागि एउटा मौ का हो अहिले सम्म उनीहरुले बहुमत प्राप्त गर्न सके का छै नन । यसपटक बहुमतसहितको सरकार बनाउन दिएर वामपन्थीहरुले साँच्चै दे शका लागि के ही गर्न सक्छन् भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई प्रयो ग र परी क्षणमा लै जानका लागि अवसर प्रदान गर्न म सम्पूर्ण दङाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु । वाम गठबन्धनको तर्फबाट मै ले प्रदे शको र कृष्णबहादुर महराजीले दे शको ने तृत्व गर्दा सिंगो दाङले दे श र प्रदे शको ने तृत्व लिने अवसर आएको छ । यसका लागि दाङका नौ वटै निर्वाचन क्षे त्रमा वामपन्थी उम्मे दवारहरुलाई विजय
गराउनका लागि अनुरो ध गर्न चाहन्छु ।